भारतीय टेलिभिजन जिन्यूज लाई दिए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्बादी अन्तरबार्ता ! चैतर्फि तारिफ !! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > Breaking > भारतीय टेलिभिजन जिन्यूज लाई दिए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्बादी अन्तरबार्ता ! चैतर्फि तारिफ !!
January 12, 2021 January 14, 2021 Raju Thapa56
एमखवर क्यानडा । जनवरी १२, २०२० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय टेलिभिजन जिन्यूज लाई राष्ट्बादी अन्तरबार्ता दिएका छन् । अन्तरबार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री वलीले देश भुगोल र जनसंख्याको आधारमा सानो या ठूलो हुन सक्छ तर राष्ट्यिता समान नै हुन्छ । ठूला देश र सानो देशको सरकार प्रमुख वा राष्ट्प्रमुखको हैसियत पनि बराबर रहने बताएका छन् ।
जिन्यूजलाइ प्रधानमन्त्री केपीको अन्तरबार्ता
उनले छिमेकि दुई मुलुक भारत र चीन नेपालका लागि बराबर असल मित्र रहेको र दुबै संग समान ब्यबहार रहने बताएका छन् । भारतले नेपालको भूभागमा भारतबाट भए गरेका हस्तक्षेप र नक्साका बारेमा पनि राम्रै जवाफ दिएका छन् । समस्या समाधानका लागि गरिएको कयौं डिल्पोमेटिक प्रयास प्रति भारतले चासो नदिएकोे प्रति पनि बोलेका छन् । आबस्यक परेमा भारत र चीनको सम्बन्ध सुधार गर्न मध्यस्थ भूमिका खेल्न समेत सक्ने उनले बताएका छन् । जिन्यूजका सुधिर चौधरीले चुनाव पछिको नेतृत्वका बारेमा गरेको प्रश्नमा आफ्नो पार्टिलेनै बहुमत ल्याई मुख्य पार्टि हुने स्पस्ट गरेका छन् । हिन्दि भाषामा अन्तरबार्ता दिएका प्रम ओलीले अनतरबार्ताका क्रममा उखान टुक्का र नेपाल भारतको ईतिहांसको बारेमा समिक्षा गर्दा जिन्यूजका पत्रकार सुधिर चौधरी छक्क पर्दै प्रश्न गरिरहेका थिए ।
ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका इन्सपेक्टरलाई कोरोना संकमण
August 2, 2020 August 2, 2020 GRISHI